Doorasho ka dhacday Gaalkacyo iyo Qoor Qoor oo ka hadlay | KEYDMEDIA ONLINE
Doorasho ka dhacday Gaalkacyo iyo Qoor Qoor oo ka hadlay
Magaaladda Gaalkacyo oo Koonfur iyo Waqooyi u kala qeybsan, islamarkaana ay kawada taliyaan labo Maamul ayaa noqotay meeshii ugu horeysay oo Golle degaan laga dhiso Galmudug.
GAALKACYO, Soomaaliya - Gollaha cusub ee degaanka Gaalkacyo, oo maalmo kahor la dhisay ayaa shalay oo Sabti ahayd doortey gudoomiyaha magaaladda iyo ku xigeenkiisa kadib doorasho ka dhacday hotel-ka Five Star.
Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa loo doortey duqa degmada halka ku xigeenkiisa loo doortey Maxamed Cabdi Cilmi, waxaana guushooda doorashadda soo dhaweeyay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor.
“Reer Galkacyo waa ku mahadyihiin sida hufnaanta, daahfurnaanta iyo dimoqraadiyadda leh oo ay uga qeyb qaateen dhismaha golaha deegaanka iyo doorashada guddoonka degmada. Waxaan rajeynayaa in degmooyinka kale ku dayan doonan Gaalkacyo” ayuu yiri Qoor Qoor.
Sidoo kale, Qoor Qoor ayaa uga mahadceliyay Wasiirkiisa Arrimaha gudaha howsha uu hayo, waxuuna ugu baaqey inuu dhameytiro qorshaha golle degaan loogu sameynayo dhamaan degmooyinka Galmudug, sida Dhuusamareeb, Cadaado, Guriceel iyo Caabudwaaq.
0 Comments Topics: dhuusamareeb gaalkacyo galmudug qoor qoor